vendredi, 31 janvier 2020 21:39
Lalam-pirenena faha-6: Hamboarina manontolo raha vao tapitra ny fotoam-pahavaratra
Nanome toky ny hanamboarana manontolo ny lalam-pirenena faha-6 ny Filohan’ny Repoblika Andry Rajoelina, ary vao tsy ela no vita ny fifanaovan-tsonia momba izany niaraka tamin’ny mpamatsy vola, ka hatomboka ny fanamboarana raha vao tapitra ny fotoam-pahavaratra, hoy ny Praiminisitra Ntsay Christian tamin’ny fandalovany tao Ambanja.
Ankoatra izay dia hamboarina ny lalana mirefy 50km mampitohy an’Ambanja sy Andoharano; ary ny ao an-tampon-tananan’Ambilobe hatrany amin’ny orinasa Sirama.
vendredi, 31 janvier 2020 21:25
Ambanja: Hahazo « émetteur radio » ny haino amanjerim-panjakana
Nandritra ny diany teto Ambanja no nampahafantaran’ny Praiminisitra Ntsay Christian fa hanome « émetteur radio » ho an’ny haino aman-jerim-panjakana ny fitondram-panjakana ary ho avy amin’ny herinandro izany. Hisy koa fiarabe homena ny Kaominina ambonivohitr’Ambanja hitaterana fako hanadiovana ny tanàna ho fanampiana ny ezaka ataon’ny Ben’ny tanàna vaovao.
Hanampy amin’ny resaka fandriampahalemana ihany koa ny fitondrana, indrindra ho fiarovana ny sehatra fitrandrahana lavanila aty an-toerana.
vendredi, 31 janvier 2020 21:14
Tetikasa Tanà-Masoandro: Hanao hetsika eny Anosivita ireo mponina voakasika rahampitso
Hifamotoana eny amin’ny fefilohan’Anosivita, rahampitso sabotsy, ireo mponina manan-tany amin’ireo Kaominina miisa efatra voakasiky ny fanatanterahana ny Tetikasa Tanà-Masoandro amin’iny Ambohitrimanjaka iny.
vendredi, 31 janvier 2020 20:34
Rakotovelomanantsoa Voahary: Laharam-pahamehana ny famatsiana rano fisotro madio ny Malagasy rehetra
Naverina hitokana ny Ministeran’ny Rano, ny Fanadiovana, sy ny Fidiovana, nosarahina tamin’ny Ministeran’ny Angovo sy ny Rano ary ny Akoranafo. Rakotovelomanantsoa Voahary no voatendry hitantana ity Ministeran’ny Rano, ny Fanadiovana, sy ny Fidiovana ity, araky ny didim-panjakana laharana 2020-070 nivoaka ny alarobia 29 janoary 2020.
Tontosa omaly teny Faravohitra ny fifamindram-pahefana teo amin’i Christian Ramarolahy, Minisitra mpisolo toerana sy Rakotovelomanantsoa Voahary, Minisitry ny Rano, ny Fanadiovana, sy ny Fidiovana.
Nambaran’ny Minisitry ny Rano, ny Fidiovana ary ny Fanadiovana fa laharam-pahamehana ny famatsiana rano fisotro madio ny Malagasy rehetra, miainga avy eny anivon'ireo distrika no hametrahana izany.
vendredi, 31 janvier 2020 20:22
Sambava: Tovolahy roa mpamboly sady mpivarotra rongony voasambotry ny Polisy
Natolotra ny Fitsarana omaly ireto tovolahy roa mbola tanora ireto, voarohirohy amin'ny fifohana zava-mahadomelina ary nivarotra sy namboly ihany koa tao amin'ny Fokontany Antohomaro, Kaominina ambonivohitr’i Sambava.
Sendra nandalo ny solombovam-bahoaka Mamangy Norbert dit Jack no nahatsikaritra fa toa misy andian-tanora mifoka zavatra hafahafa ka nanaitra avy hatrany ny Polisim-pirenena ary izay no nahatratrarana azy ireto. Taorian’ny fanadihadiana nataon'ny mpitandro filaminana no nafantarana fa hatramin'ny fambelonena rongony ataon'izy ireo.
Manodidina eo amin ny 4kg ireto rongony nodorana teo amin'ny tokontany malalaky ny Polisim-pirenena ny alarobia 29 janoary teo.
vendredi, 31 janvier 2020 16:12
Fampianarana ambony: Vao vita « passation » dia nandray ireo solontenan’ny SECES ny minisitra Assoumacou Elia Béatrice
Nandray ny asa maha Minisitry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa azy avy hatrany ny Profesora Assoumacou Elia Béatrice taorian’ny famindram-pahefana teo amin’ny minisitry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa teo aloha, Profesora Blanche Nirina Richard, sy izy minisitra vaovao, androany 31 janoary 2020.
Nambaran’ny Profesora Assoumacou Elia Béatrice fa laharam-pamehana ho azy ny famerenana ny « paix sociale » eny anivon’ny oniversite, ny famahana haingana ny olan’ireo mpampianatra, ny fanatsarana ny kalitaon’ny fampianarana hifanaraka amin’ny tolotr’asa misy, ny fametrahana ireo oniversite manakaiky vahoaka izay efa andalam-panorenana ny efatra, ary ny enina kosa hatomboka amin’ity taona ity. Tsy adino ihany koa ny fanatrarana ny haitsara amin’ny lafiny fikarohana.
vendredi, 31 janvier 2020 15:58
Faritra mando: Manana 20 i Madagasikara misandrahaka amin'ny velaran-tany 2 094 910 ha
Ankalazaina isan-taona, isaky ny 2 febroary ny « Andro erantany ho an'ny faritra mando ». Naroso androany zoma 31 janoary 2020 ny fankalazana ho an’i Madagasikara, ka teny amin'ny « Parc Tsarasaotra » Antananarivo no nanatanterahana izany, izay notarihin'ny Minisitra Baomiavotse Vahinala Raharinirina. Ity rahateo no hetsika ara-panjakana voalohany nisehoany taorian’ny nanendrena azy ho minisitry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra, ny alarobia 29 janoary teo.
Ny « Parc Tsarasaotra » no kely velarana indrindra amin'ireo faritra mando miisa 20 eto Madagasikara izay voakilasy ao anatin'ny "Site Ramsar" ary misandrahaka amin'ny velaran-tany mirefy 2 094 910ha. Misy karazam- borona 68 ato amin'ity parc Tsarasaotra ity, ka miankina amin'ny rano na faritra mando ny 20 amin'ireo ary atahorana ho lany tamingana ny vorona miisa 4.
vendredi, 31 janvier 2020 15:47
Brexit: Vita hatreo ny amin’i Royaume-Uni sy ny Vondrona eorôpeana
Daty ho raiketin’ny tantara eo amin’ny fifandraisan’i Royaume-Uni sy ny Vondrona eorôpeana ity 31 janoary 2020 ity. Mifarana tanteraka hatreto ny fiarahan’ny roa tonta, rehefa naharitra 47 taona. Isany nanajary hahatongavana amin’izao i Boris Johnson, praiminisitra anglisy ankehitriny. Nanao ihany i Theresa May praiminisitra teo alohany, fa nametra-pialana no niafarany rehefa tsy nahavita.
vendredi, 31 janvier 2020 15:34
Ambatovy: Namonjy fianakaviana 400 traboina ao amin’ny Distrikan’Ambatondrazaka
Nanolotra sakafo sy kojakoja vonjiranovaky miteti-bidy 20 tapitrisa Ariary sahaza fianakaviana traboina 400 ao amin’ny Distrikan’Ambatondrazaka ny orinasa Ambatovy, omaly. Ahitana vary 4 taonina, tsaramaso 1 taonina, menaka fihinana 600 litatra, siramamy 8 gony, ary savony 30 baoritra izany fanomezana izany.
vendredi, 31 janvier 2020 15:27
Ambatondrazaka: Mpandraharaha nisy nanafika, voaroba 2 tapitrisa Ariary
Mpandraharaha mpividy kisoa no notafihin’ny jiolahy folo mahery mirongo basy tao an-tranony ao Avaradrova Avaratra, zanabohitra Pasazy ny alin’ny alarobia hifoha ny alakamisy 30 janoary. Tsy nisy ny aina nafoy saingy norobain’ny jiolahy ny vola roa tapitrisa Ariary tao amin’izy ireo.